Maamul goboleedyada oo loo ogolaaday inay bixiyaan Rukhsadaha Kalluumeysiga - BAARGAAL.NET
Maamul goboleedyada oo loo ogolaaday inay bixiyaan Rukhsadaha Kalluumeysiga
✔ Admin on February 11, 2018 0 Comment
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa markii uguhoreysay u ogolaatay dowlad goboleedyada dalka inay bixin karaan rukhsadaha Kalluumeysiga masaafo dhan "24 nautical miles" Biyaha Soomaaliya.
Annagoo tixgelineyna baahida weyn ee loo qabo ilaalilnta, maareeynta iyo in si joogta ah looga faaiideysto kheyraadkakalluunka badda.
Markaan aragnay baahida loo qabo in ilihii dhaqalaha dalka dib loo soo nooleeyo si ay dowladda ugu suurta-gasho in ay ku fillaato bixinta kharashyada sugidda amniga iyo dib-u-dhiska waddanka oo ay ugu muhiimsanyahiin Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka.
Bixinta rukhsadaha kalluumeysiga wixii ka sarreeya 24 Nautical Miles ee Aagga Dhaqaale ee (EEZ) waxaa u xilsaaran Dowladda Feedraalka ah oo ay masuul uga tahay Wasaaradda Kaluumeysiga iyo Kheyraadka Badda.
Hayaddaas waxaa Guddoominaaya Wasiirka Kalluumeeysiga iyo Kheyraadka Badda ee Federaalka waxaana xubna ka ah wasiirada kallumeysiga dowladaha xubinta ka ah Dowladda Federalka.Xilka iyo wajibaadka Hayadda Kallummeysiga Soomaaliyeed waxa soo saraya Guddiga Aminga Qaranka oo ka kooban Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya, Raisul Wasaaraha Xukumada Federaalka Soomaaliya, Madaxweynayaasha dawladda xubinta ka dawladda federaalka iyo Gudoomiyaha Gobolka Benaadir.
QEEYBSIGA IYO UJEEDDOOYINKA LOOISTICMAALAYO DAKHLIGA
Heshiiskan waxaa uu dhaqan gal yahay ilaa iyo inta ay Dowladda Federaalka iyo Dowladaha xubinta ka ah Dowladdaiyo Maamulka Gobolka Banaadir ka gaaraayaan heshiis dhameeystiran ee qeybsiga dakhliga ka soo xarooda kalluumeysiga.